January 1, 2021 - Khitalin Media
January 1, 2021 by Khitalin Media
အိမျသုံးဆားနဲ့ရောဂါကို အမွဈကိုပွတျမှာ ၁။ ကလေးမြားဥတုအကူးတှငျ ခြှဲပူထပွီးခြောငျးဆိုးရငျ ကွပျရောဂါဖွဈလြှငျ အိမျသုံးဆားကို ကှမျးရှကျတှငျ ကနျတော့ထိုး၍ အထုပျငယျလေးမြားပွုလုပျကာ သံပွားပျေါတှငျတငျ၍ မီးအပူပေးပွာခပြါ ထိုကှမျးရှကျ + ဆား ပွာကိုသံပရာရညျဖွငျ့ ဖြျော၍ တိုကျပေး၊ လကျြပေးလြှငျ ခြောငျးဆိုးရငျကပျြရောဂါ ပြောကျကငျးစနေိုငျသညျ။ ၂။ လူကွီးမြားရခြေိုးမှားအပူငုပျ၍ ခြောငျးဆိုးလြှငျ အိမျသုံးဆားဟငျးစားဇှနျးတဈဇှနျးကို ဒယျအိုးဖွငျ့ နီအောငျလှျော ပူနတေုနျးသံပရာသီးတဈလုံး အရညျညှဈခဖြျောပွီး လကျြပေးပါ။ အပူငုပျအသံဝငျ ခြောငျးဆိုးပြောကျကငျးနိုငျသညျ။ ၃။ ဥတုအကူးအပွောငျးတှငျ လတေိုကျအခိုးငုပျ၍ ခန်ဓာကိုယျအရပွေားတှငျ မိတျကဲ့သို့ ယားဖုမြားထှကျလြှငျ သနပျခါးအမွဈကို ဆားဖွငျ့ရောသှေးလိမျးခွငျးဖွငျ့ သကျသာစနေိုငျသညျ။ ၄။ မိတျအိုငျးကဲ့သို့ ယားဖုကွီးမြားထှကျလြှငျ ခရပှေငျ့ခွောကျကို ဆားအနညျးငယျဖွငျ့ သနပျခါးကြောကျပဉျြတှငျ ရောသှေးလိမျးလြှငျ ပြောကျကငျးနိုငျသညျ။ ၅။ သာမနျမကျြစိနာ မကျြစိနီရဲသူမြား ဆားရညျဖြျော၍ အရညျကွညျကိုမကျြစဉျးခတျပေးလြှငျ မကျြစိနာခွငျး၊ … Read more
နှစ်သစ်မှာ အိမ်ပိုင်၊ ကားပိုင်နဲ့ နေကြလိုသူများအတွက်
နှစ်သစ်မှာ အိမ်ပိုင်၊ ကားပိုင်နဲ့ နေကြလိုသူများအတွက် နှစ်သစ်မှာ အိမ်ပိုင်နဲ့နေကြရအောင် နော် အိမ်ပိုင်ရှိသူကလည်း ကားပိုင်နဲ့နေကြရအောင်ပေါ့လေ… ၂၀၂၀ က အရမ်းထူးခြားတယ်နော် ကောင်းသောဘက်ဆိုးသောဘက် ၂မျိုးလုံးကို ထူးခြားစေတာ ၂၀ ကို ၂ခါကြွင်းတဲ့ နှစ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေ…ထားပါလေ။ ဒီနှစ် ကုန်ဖို့ရာအတွက် ပျမ်းမျှ ရက်က (၄)ရက် နဲ့ နာရီ နဲ့တွက်ရင် နာရီပေါင်း ၉၆ နာရီ မိနစ်နဲ့တွက်ရင် မိနစ်ပေါင်း ၅၇၆၀ မိနစ်ချည်းတောင် ကျန်ပါသေးတယ် ….. အဲ့တော့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးတာနဲ့ အောက်ပါ ဂုဏ်တော်ကို အခေါက်အရေအတွက် ရသလောက်ရွတ်ပြီးမှ မနက်ကို စတင်ပါ …. ဒီ ဂုဏ်တော်ကိုရွတ်ဖတ်နိုင်သလောက် ရွတ်ပြီး ဆရာနဲ့အတူ ၂၀၂၁ ကို စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးကြရအောင်နော် … Read more
ထူးခွားလှနျးတဲ့ သိနျး တဈသောငျးခှဲဆုရှငျ ဈေးသညျမလေးရဲ့ စိတျထားနဲ့ သဘောထား(ရုပျသံ)
ထီလကျမှတျအပျဖို့ကွိမျးမောငျးနတေဲ့ ဆှမြေိူးသားခွငျးတှကွေောငျ့ အိမျမပွနျရဲပဲရှောငျတိမျးနရေတဲ့ သိနျးတဈသောငျးခှဲကံထူးရှငျ မဝငျးဝငျးအိ ၂၃ ကွိမျမွောကျ ကပျြသိနျးတဈသောငျးခှဲ ထီဆုကွီးကို မန်တလေးမွို့မှ အသကျ၂၄ နှဈအရှယျ ဈေးသညျတဈဦး ဆှတျခူး ၂၃ ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလေ ကပျြသိနျးတဈသောငျးငါးထောငျ ထီဆုကွီးကို မန်တလေးမွို့မှ အသကျ၂၄ နှဈအရှယျ ဈေးသညျတဈဦးက ဆှတျခူးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ မန်တလေးမွို့၊ ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျ၊ ဇီးအုပျကြေးရှာတှငျ အိမျငှားရမျးနထေိုငျပွီး သားငါးရောငျးခသြညျ့ အမြိုးသမီးငယျ တဈဦးမှ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ၏ ကပျြသိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကို ဆှတျခူးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ သူမအနဖွေငျ့ ၂၀၂၀ တဈနှဈလုံး ထီထိုးခဲ့ခွငျးမရှိဘဲ ယခုလတှငျမှ ထီထိုးခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး အသကျ ၁၉ နှဈအရှယျမှ စတငျထီထိုးခဲ့ကွောငျး၊ ပထမဆုံး ထီပေါကျခွငျးတှငျ ကပျြသိနျး တဈသောငျးခှဲဆုကို ကံထူးခဲ့သဖွငျ့ ယုံကွညျနိုငျခွငျး မရှိသေးဘဲ အရမျးအံ့သွမိကွောငျး … Read more
သင့် CRUSH က သင့်ကို သဘောကျနေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ (၁၀) ချက်
ကိုယ့်ရဲ့ crush က ကိုယ့်ကို ပြန်ကြိုက်နိုင်မလားဆိုတာ သူ့ဆီမှာ တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာ တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က ကြိတ်ပြီးသဘောကျနေရတဲ့သူ၊ ချစ်နေရတဲ့သူ ကိုယ့်ပြန်ပြီး သဘောကျလာစေချင်တာ အားလုံး ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒဖြစ်မှာပါ။ ဆန္ဒပြည့်ဝခဲ့သူတွေရှိသလို မပြည့်ဝခဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့မှာပါ။ကိုယ့်ရဲ့ crush က ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး သဘောကျနေသလားဆိုတာ အခုဖော်ပြမယ့် အချက် (၁၀) ချက်ကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေ တွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ ဖွင့်ပြောဖို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့တော့။ ၁။ သင်က တခြား ယောက်ျား လေးတွေ၊ မိန်းကလေး တွေနဲ့ ရှိနေ၊ စကားပြောနေရင် သူသဝန်တိုနေမယ်။ ၂။ သင့်ကို မကြာခဏ စကားလာပြောဖို့ ကြိုးစားမယ်။ ၃။ သင့်ကိုယ်စား သူဝမ်းသာပေးမယ်။ ဝမ်းနည်းပေးမယ်။ ၄။ … Read more
သိနျးတဈသောငျးခှဲဆု ပေါကျတဲ့ ပရဟိတဆရာတျောမှ သားမယားပွုကငျြ့မှုဟာ လုပျကွံခံရကွောငျး ဆရာသနျးထိုကျလငျးပွောဆို..
သိနျးတဈသောငျးခှဲဆု ပေါကျတဲ့ ပရဟိတဆရာတျောမှ သားမယားပွုကငျြ့မှုဟာ လုပျကွံခံရကွောငျး ဆရာသနျးထိုကျလငျးပွောဆို အောငျဘာလေ သိနျးတဈသောငျးခှဲဆု ပထမဆုံးပေါကျတဲ့ ပရဟိတဆရာတျော သူ့ကြောငျးကဆရာမကို သားမယားပွုကငျြ့မှုနဲ့ လူဝတျလဲဖမျးဆီးခံရဟုဆိုသော သတငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး သတငျးအမှားဖွဈကွောငျး၊ အမှုဖှငျ့ခံထားရသညျဆိုတာ မှနျသျောလညျး ဆရာတျောသညျ လူဝတျလဲတယျဆိုတာ မဟုတျသေးကွောငျး ဆရာတျော၏ ကြောငျးတှငျ စာသငျပေးနသေော ဆရာဦးသနျးထိုကျလငျးမှ အခုလိုတိုကျရိုကျ Live လှငျ့၍ ပွောဆိုလိုကျသညျ။ အမှနျတရားပျေါထှကျဖို့ အရေး ဝနျးရနျမညျဖွဈကွောငျး၊ ဆရာတျောအား လုပျကွံစှပျစှဲခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ဆရာတျောအား မရရအောငျဝနျးရံကယျတငျမညျဖွဈကွောငျးကိုလညျး ဆရာဦးသနျးထိုကျလငျးမှ ပွောကွားသညျ။ အပွညျ့အစုံအား ရုပျသံဖိုငျတှငျကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။ နပွေညျတျော တောငျနီလေးဆရာတျော ( အေးမတ်ေတာစံပရဟိတကြောငျး ) နှငျ့ ပတျသကျသမြှ ။ အမှနျတရားဘကျက ရပျတညျသညျ ။ ဆရာဦးသနျးထိုကျလငျး Video-Than Htike Linn သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု … Read more
တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မကုန်ဘဲ ကျောက်ကပ်ရောဂါပျောက်နည်း
တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မကုန်ဘဲ ကျောက်ကပ်ရောဂါပျောက်နည်း ကျောက် ကပ် ရောဂါနဲ့ ပါတ်သက်လို့ စိတ်ညစ် နေကြ သလား။ ငွေတစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မကုန် စေရဘဲ ပျောက်ကင်း စေရမယ်။ စိတ်ချ လက်ချနဲ့ ယုံယုံ ကြည်ကြည် သောက်ကြည့် လိုက်စမ်းပါ။ ပြောင်းဖူးက ထွက်တဲ့ အမွှေး ကို သွေ့ခြောက်အောင် အခြောက် ခံပြီး လ္ဘက်ခြောက် လိုမျိုး ရေနွေးထဲ ခပ်သောက်ပါ။ ဒိဌ ပျောက်ကင်း ပါသည်။ သွေ့ခြောက် = နေ ပူ တိုက်ရိုက် မခံဘဲ နေရိပ် ထဲမှာ ဖြန့်လှမ်း အခြောက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆေးမြီးတိုများ Credit :မြန်မာ့ဆေးစွမ်းကောင်း Unicode တဈပွားတဈခပျြမှ မကုနျဘဲ ကြောကျကပျရောဂါပြောကျနညျး ကြောကျ … Read more
လမ်းမများပေါ်မှာ မီးသွေးခဲဖြင့် စာများ ရေးလေ့ ရှိ သော စိတ်မနှံ့သူ အောင်ဘာလေထီဆုပေါက်
မန္တလေး လမ်းတကာလှည့်သွားနေတဲ့ စိတ်ဝေဒနာရှင် အောင်ဘာလေထီကံထူးရှင်ကြီး “စိတ်ဝေဒနာရှင် ကိုဝေလင်းထွန်းသိန်း ၅၀၀ထီပေါက်” နှစ်သစ်ကူး 2021 ပထမရက်မှာ အံ့ဖွယ် စိတ်မနှံ့သူ သိန်း 500 ဆု ထီပေါက်ခြင်း ! မန္တလေး လမ်းမများပေါ် လမ်းတကာ လျောက်သွားနေသော “အရူး ဝေလင်းထွန်း” သိန်း 500 ထီပေါက်လို့ မန္တလေးပြည်သူများအားလုံးက အံ့သြခဲ့ကြရပါတယ်။ သူဟာ စိတ်မနှံ့ သူဖြစ်ပီး လမ်းမများပေါ်မှာ မီးသွေးခဲဖြင့် စာများ ရေးလေ့ ရှိကာ… ခင်သူများဆီမှ မုန့်ဖိုးတောင်းလေ့ ရှိပီး လူများက တခါတရံ မုန့်ဖိုး လက်ဖက်ရည်ဖိုး ပေးကာ အမှိုက် ပစ်ခိုင်းကြ၏ ။ ထီထိုးချင်သည်ဟုဆိုကာ 33 x84 အောင်သပြေမှ ထီထိုး ခဲ့ရာ … ထူးဆန်းစွာ … Read more
၂၃ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင် ထီဆုကြီးကို မန္တလေးမြို့မှ အသက်၂၄ နှစ်အရွယ် ဈေးသည်တစ်ဦးက ဆွတ်ခူးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မန္တလေးမြို့၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ဇီးအုပ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်ပြီး သားငါးရောင်းချသည့် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၏ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူမအနေဖြင့် ၂၀၂၀ တစ်နှစ်လုံး ထီထိုးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ယခုလတွင်မှ ထီထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှ စတင်ထီထိုးခဲ့ကြောင်း၊ ပထမဆုံး ထီပေါက်ခြင်းတွင် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းခွဲဆုကို ကံထူးခဲ့သဖြင့် ယုံကြည်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဘဲ အရမ်းအံ့သြမိကြောင်း ကံထူးရှင် မဝင်းဝင်းအိက ဆိုသည်။ မွေးချင်းငါးယောက်အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် သူမအနေဖြင့် ၅၆ လမ်း အောင်ပင်လယ်ဈေးတွင် သားငါးရောင်းချခြင်းဖြင့် မိသားစု၏ တာဝန်ကို ဖြေရှင်းနေရသလို လက်ရှိနေထိုင်သည့် … Read more
(၂၃)ကြိမ်မြောက် သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုရှင်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ
သိန်း ၁၅၀၀၀ဆုရှင်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ (၂၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် (၁၀၀၀) တန်အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲမှ ကျပ်သိန်း(၁၅၀၀၀) ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်မှ မဝင်းဝင်းအိက ဆွတ်ခူးရရှိ နေပြည်တော် ၊ ဇန်နဝါရီ(၁) ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ ယနေ့ ဖွင့်လှစ်သည့် (၂၃) ကြိမ်မြောက် ကျပ် (၁၀၀၀) တန် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲတွင် သိန်း တစ်သောင်းဆုမဲသည် (ကဂ- ၄၀၆၁၀၄)နံပါတ်ဖြင့် ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းဆုကို မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်ရှိ မိုးယံရွှေလမင်းနှင့် မြတ်ဆုကုဋေထီဆိုင်မှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကံထူးရှင်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ၄၈x၄၉ လမ်းကြား၊ ဇီးအုပ်ကွက်သစ်တွင် နေထိုင်သူ မဝင်းဝင်းအိက ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နေပြည်တော်သတင်းဌာန ။ MRTV (၂၃) ကြိမ်မြောက် ထီမတိုက်ရသေးသူများ ထီပေါက်စဉ် … Read more
ကြာသပတေး သား/သမီးတွေရဲ့ ၂၀၂၁ ❤️ ကြာသပတေး သားသမီးများသည် စိတ်ရင်စေတနာကောင်းပြီး ပွင့်လင်းဖြူစင်သောစိတ်ပိုရှိလာတဲ့နှစ်ပါလူတိုင်းကိုခင်မင်တတ်သည်။ အကူအညီတောင်းခဲလျှင်လည်း မည်သူ့ကိုမဆို အကူအညီပေးရန်အသင့်ရှိနေတတ်သူဖြစ်သည်။ လူအများနှင့် စည်းစည်းလုံးလုံး၊ ညီညီညွတ်ညွတ်နေချင်စိတ်ရှိသူဖြစ်မည်။ မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းများအပေါ် အလွန်သံယောဇဉ်ကြီးတတ်များဖြစ်ကြသည်။ တည်တည်ကြည်ကြည်နေတတ်ပြီး စိတ်သဘောထားကောင်းမည်။ဖြစ်လေရာဘဝ၊ ရောက်ရာအခြေအနေတွင် ပျော်သလိုနေတတ်မည်။ စိတ်ဓာတ်ထက်မြက်ပြီး မတရားမှုကိုဆန်ကျင့်သူများဖြစ်သည်။ ပြောစရာရှိလျှင်ဗြောင်ပြောလွန်းသောကြောင့် လူများစုကတခါတလေ အမြင်ကပ်ကြသည်။ သင်သည်ခံစားချက်များကိုရင်ဖွင့်တတ်သော်လည်း လုပ်ရမည့်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အလွန်လျို့ဝှက်တတ်မည်။ သင်ဘာလုပ်မည်ဆိုတာကိုမည်သူမျှ မသိနိုင်ပါ။ အလုပ်ကို အပင်ပန်းခံလုပ်နိုင်မည်၊ ကြိုးစားသည်။ ကြိုးစားသလောက် အရာမထင်ဖြစ်တတ်သည့် ကံမျိုးကြုံရတတ်ပါသည်။ လူအများက ပေါ့သည်ပျင်းသည်ဟု ထင်နေကြသည်။ အလုပ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားမလုပ်ခြင်းကြောင့်လည်း ဒုက္ခကြုံရတတ်ပါသည်။ ဒုက္ခကြုံလျှင်ဖြစ်စေ၊ပျော်စရာကြုံသည်ဖြစ်စေ ကံကိုပုံချတတ်သောစိတ်မျိုးရှိသည်။ မနက်ဖြန်အတွက်ကိုတွေးပူနေတက်သူမဟုတ်ပါ။ လက်ထဲငွေရောက်လျှင်လည်း ဘာမှမည်မည်ရရမဟုတ်ဘဲ ကုန်နေတတ်မည်၊လက်ထဲငွေအနည်းငယ်ရှိနေလျှင် အလုပ်ပ်ချင်စိတ်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ငွေထက်ပစ္စည်းကိုပိုစုဆောင်းတတ်မည်။ စကားပြောရာတွင် နူးညံ့သိမ်မွေ့မည်။ကြည့်လိုက်လျှင် မပြောတတ်သလိုနဲ့ တကယ်တမ်းပြောလျှင် အကွက်ကျကျ … Read more